၀၉:၁၅၊ ၂၇ ဇွန် ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ရေမြိုဝ်ဘုရား ကို ဖန်တီးခဲ့သည် ("ရေမြိုဝ်ဘုရားသ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၇:၄၆၊ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:The sign of Gwaykone.jpeg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (This photo isasign of the village tract of Gwaykone Village.)
၁၇:၄၆၊ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:The sign of Gwaykone.jpeg ကို upload တင်ခဲ့သည် (This photo isasign of the village tract of Gwaykone Village.) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၆:၄၉၊ ၂၂ မတ် ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:New Flag of Myanmar.jpeg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (2021 In January it was proposed to be used legally in Myanmar.)
၁၆:၄၉၊ ၂၂ မတ် ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:New Flag of Myanmar.jpeg ကို upload တင်ခဲ့သည် (2021 In January it was proposed to be used legally in Myanmar.) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၃:၁၆၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:Signboard of Gwekon(Gwaykone) Village.jpeg ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
၀၃:၁၆၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Signboard of Gwekon(Gwaykone) Village.jpeg ကို upload တင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၃:၁၀၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:Map of Gwekon(Gwaykone) Village.jpeg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (This photo is made by own . I screenshot of Map of Gwekon.google map)
၀၃:၁၀၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Map of Gwekon(Gwaykone) Village.jpeg ကို upload တင်ခဲ့သည် (This photo is made by own . I screenshot of Map of Gwekon.google map) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၂:၅၇၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:Gwekon Town entering signboard.jpeg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (This photo isasign of the Gwaykone Town or the Gwaykone Village tract.)
၀၂:၅၇၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Gwekon Town entering signboard.jpeg ကို upload တင်ခဲ့သည် (This photo isasign of the Gwaykone Town or the Gwaykone Village tract.) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၄:၄၅၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အသုံးပြုသူ:Zwal Mhan ကို ဖန်တီးခဲ့သည် ("အမည် မောင်ဇွဲမ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၃:၂၉၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက် ကို ဖန်တီးခဲ့သည် ("ေအးခ်မ္းသာယာရပ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၃:၅၈၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ အသုံးပြုသူအကောင့် Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/Zwal_Mhan" မှ ရယူရန်